Boosaaso: Puntland oo xukun dil ah ku riday haweeney soo xaday ilmo yar | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Boosaaso: Puntland oo xukun dil ah ku riday haweeney soo xaday ilmo...
Boosaaso: Puntland oo xukun dil ah ku riday haweeney soo xaday ilmo yar
Boosaaso (Halqaran.com) – Maxkamadda Darajada Koowaad ee Maamulka Puntland ayaa Khamiista maanta ah xukun dil toogasho ah ku riday haweenay lagu soo eedeeyay inay soo xaday ilmo yar oo aysan dhalin.
Haweeneydaan oo lagu maacaabo, Ruqiyo Cabdi raxmaan Maxamed ayaa lagu eedeeyay inay soo xaday ilmo yar oo aysan dhalin, kadibna ilmahaasi uu ku dhintay gurigeeda intii ay gacanta ku haysay.
Guddoomiyaha maxkamadda derejada koowaad ee gobolka Bari Abukar Cabdinuur Jaamac oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in eedaysane Ruqiyo ay qiraal ka tahay dambiga lagu soo oogay ee ah in ay xadday gabar sannad jir ahayd taasi oo gurigeeda ku dhimatay sabab kastaba ha u dhimatee.
Sayga qaba haweeneydaas la xukumay oo lagu magacaabo, Ismaaciil Cali Nuur ayay sidoo kale maxkamaddu ku xukuntay saddex sannadood oo xarig ah, inkastoo aan lagu helin caddayn muujinaysa in uu qayb ka ahaa xatooyada ilmahaasi yar.
Ugu dambeyn, maxkamadda Darajada Koowaad ee Maamulka Puntland ayaa sheegtay in labada xukmane oo kala ah haweeneyda iyo saygeeda ay haystaan mudda 30 cisha ah oo Rafcaan qaadasho ah.